Justice Archives - Tamban RELAY
Chinde Nyamavhuvhu 7, 2020 0
Iyo inodenha yakatemera mutoro unorema pane Free, iyo yakavharidzira kweanopfuura gore kuvhurwa kweanoshanda oparesheni asi akapiwa mvumo yekushandisa network yayo. Iyo standoff inoenderera mberi mukukakavara uko kwave kuri kupesana nemushandi we ...
ALVARO URIBE: Aimbova mukuru-wemapapiro akasungwa akasungwa!
ALEXIS WAYAN Nyamavhuvhu 5, 2020 0
NeChipiri, Dare repamusoro rakaraira kusungwa nekusungwa kwedzimba kweaimbova purezidhendi webato rorudyi, Alvaro Uribe. Nhasi uno senator, anofungidzirwa kupupurira kudhara uye huori. Inguva yekutanga kuti ...
CPI: ndevapi vamiriri veAfrican mukana weFatou Bensouda mutsivi?
Chinde Nyamavhuvhu 3, 2020 0
Nyanzvi ina dzakasarudzika zviri pamutemo chigaro chemuchuchisi weInternational Criminal Court, zvinosanganisira uyo akagadzwa naSusan Okalany wekuUganda uye weNigerian Morris Anyah. Yakatanga Nyamavhuvhu apfuura, sarudzo yeku ...
Kutsiva kwemuchuchisi kuICC: vari kukwikwidza vari kunetseka kuti vape!
Iwo mana emakurukota akasarudzwa pachinzvimbo chemuchuchisi weInternational Criminal Court akapfuura kubvunzurudza kwebasa chaiko. Chiitiko chakasiyana. "Iwe unofunga here kuti zvakakodzera kuti muchuchisi aonekwe?" "" Ucha ...
Chinde Nyamavhuvhu 1, 2020 0
Vanochengetedzeka veBelarusian vakasunga vanhu veRussia neChitatu, vachiti vaive pachinangwa chekutapa nyika nyika. Iyo Kremlin yakakumbira Belarus 'yaimbova Soviet mubatanidzwa kuburitsa makumi matatu nevarume veRussia akaitwa mu…
Belarus inovhura kuongorora kwematsotsi mu "zviitiko zvehugandanga" zvakarongwa nemaRussia masenaries akasungwa pamberi pesarudzo dzemutungamiri wenyika. Belarus yakavhura kuongorora kwematsotsi mu "zviitiko zvehugandanga" zvakarongwa na ...
Mauto ezvekudzivirirwa ari kutsvaga murume wepfuti mutaundi reSange, padyo nemuganho weBurundi, gavhuna wedunhu akadaro. Musoja kumabvazuva kweDemocratic Republic of Congo akapfura akauraya vanhu vangangoita gumi nevaviri uye ...
Muwori anozivikanwa Tsitsi Dangarembga akasungwa mushure mekunge vatongi varambidza kuratidzira kwehuwori uye kuoma kwehupfumi. Munyori anohwina mubairo Tsitsi Dangarembga asungwa muguta guru reZimbabwe ...
Sei iyo BBC yakadhindisa chinyorwa chinorumbidza wezana ramakore rechi 2018 Nigerian mutengesi mukati mevaratidziro yepasi rose yeBM? MunaChikunguru XNUMX, mutori venhau weNigerian uye munyori Adaobi Tricia Nwaubani vakanyora murume…
Zimbabwe: Kubhadhara madhora mazana matatu ezviuru emadhora kuvarimi vachena semubhadharo ...
Chinde Juil 31, 2020 0
Harare ichabvisa mabvumirano enguva refu uye nekubatana vanopa kune dzimwe nyika varimi uye varimi kuti vawane mari. Zimbabwe neChitatu yakabvumirana kubhadhara madhora zviuru mazana matatu emadhora mukubhadhara ...